China Industry News Factory - Lixabiso Industry News Supplier, Lweentwngiso
ixesha Post: 04-20-2018
ixesha Post: 03-21-2018
ixesha Post: 03-15-2018
ixesha Post: 03-09-2018
ixesha Post: 03-07-2018
ixesha Post: 03-02-2018
ixesha Post: 02-28-2018
ixesha Post: 02-23-2018
ixesha Post: 02-06-2018
ixesha Post: 01-25-2018
ixesha Post: 01-19-2018
ixesha Post: 01-12-2018
ixesha Post: 01-04-2018
ixesha Post: 12-22-2017
ixesha Post: 12-14-2017
ixesha Post: 12-06-2017
ixesha Post: 11-30-2017
ixesha Post: 11-03-2017
ixesha Post: 10-27-2017
ixesha Post: 10-19-2017
ixesha Post: 10-05-2017
ixesha Post: 09-29-2017
ixesha Post: 09-22-2017
ixesha Post: 09-19-2017
ixesha Post: 09-05-2017
ixesha Post: 08-23-2017
Olu hambo yi ngokwendalo angabizi
ixesha Post: 08-07-2017
weza qho ngoMvulo, abakhweli kwakhona ezixineneyo ebhasini / engaphantsi, ubomi kabuhlungu endleleni, ndicinga ukuba intliziyo yethu uyadinwa, nokucacisa makeup, wagcina kufuma ukubila esihlweleni. Nangona izixhobo yendlela esetyenziswayo ezahlukeneyo, kodwa kwakhona oku akuthethi ukuhlangabezana bonke abantu: ukuqhuba imoto, nathi ukuvimbela; metro ibhasi, ...Funda ngaphezulu »
Umahluko phakathi Koowheel uK8 hoverboard rhoqo 6.5inch
ixesha Post: 07-26-2017
1. Price Koowheel 6.5inch smart balance wheel k8 is cheaper than regular 6.5inch hoverboard on the market. 2. Apearance Koowheel 6.5inch hoverboard k8 has the following features: private mode. Milan designer, which In line with European and American aesthetic habits. HANGHONG Motor (ensure t...Funda ngaphezulu »
Ngaba umntu balancing ngezithuthuthu ekhuselekileyo ukusebenzisa?
ixesha Post: 07-07-2017
Self Ukulungelelanisa ngezithuthuthu, okanye eyaziwa ngokuba hoverboard, ibhodi balancing ukuzeyisa, electric balance scooter ube yinto ethandwa kakhulu kwiminyaka yakutshanje. Ingakumbi US UK, bathanda zizele mngeni kunye nemincili, ufumane izinto funny kubomi bemihla ngemihla. Aba 2 wheel ngezithuthuthu zombane ukunikela ...Funda ngaphezulu »
Ngubani uthi akakwazi kuba mnandi ngokuhamba kwangemihla?
ixesha Post: 07-03-2017
Wena zazizimisele skateboarding kodwa adikwe zonke ityhalela ngeenyawo zenu? Kukho a Rubber entsha yombane evela Koowheel China. Mhlawumbi ungatshintsha indlela ukuhamba. Le photo ilandelayo kuthatha yi htfubeck. Enkosi ukwabelana ngayo. I Koowheel electric longboard Rubber wadalwa sim ...Funda ngaphezulu »
Iingcebiso amathathu ngokukhetha Rubber yombane
ixesha Post: 06-27-2017
Ngoku abantu abaninzi isicelo fashion kunye nobuchwepheshe xa zokuhamba hamba, ngoko scooter zombane yimfuneko kundwendwelo iqela fashion. Kodwa ezininzi iimveliso ezintsha, umntu balancing ixabiso scooter ibiza kakhulu, ngoko simele silumke xa uthenga. Siye wachaza izinto ezintathu purc ...Funda ngaphezulu »
Loluphi uhlobo amava i Rubber yombane inokukuzisela?
ixesha Post: 06-06-2017
Ukunatyiswa okrelekrele amava ukuzonwabisa zombane Skateboards kuba iimpawu azalwa zolonwabo. Ngo-1950 emva kwexesha, abahlali Southern California beach uluntu wakha Rubber yokuqala yehlabathi. Njengoko ukwandiswa lokutyhutyha phezu komhlaba, Electric Hoverboard iye utywala ...Funda ngaphezulu »
Yeyiphi isixhobo travel ilungele wena?
ixesha Post: 05-19-2017
Okwangoku, kwixesha elifutshane kumgama yezothutho, i youngers uhlawula ingqalelo engakumbi scooter balance, isithuthuthu yombane, isithuthuthu sombane kunye Rubber yombane ezi ntlobo ezine. iimpawu zabo eziqhelekileyo, ukongeza yombane, eyona nto ibalulekileyo kukuba nakho ukuguqulwa kunye neempawu ezininzi ezintsha, njengoko w ...Funda ngaphezulu »
Kutheni E-Rubber kushushu kwaye kwamkelwa ngabantu abaselula?
ixesha Post: 05-11-2017
Electric Rubber uzele kumnandi kwaye iba nto uyithandayo izizwe ezininzi ezincinane. Kutshanje, amantombazana ingakumbi abaninzi baqala ukungenela kweli qela. Nangona kunjalo, lo Rubber abo amantombazana basebenzisa asilulo zemveli, kodwa KOOWHEEL D3M Motors ezimbini Electric Rubber. Loo Rubber anawo appearan amahle ...Funda ngaphezulu »
Njani malunga nokhuseleko kuba omdala ekhwele KANTI yombane?
ixesha Post: 04-17-2017
Ngoku ke ngezithuthuthu zombane waba ukhetho ethandwayo obumnandi okuhle. Abantu abatsha ekhwele imali scooter yombane, unako ukusebenzisa ukulingana kunye reflex namandla, kwaye ikhuthaze uphuhliso kwiCerebellum nokukhuthaza uphuhliso kwengqondo, ukuphucula kwegazi cardiopulmonary. ...Funda ngaphezulu »
Electric balance scooter - Bonisa ubomi bakho fashion
ixesha Post: 04-05-2017
jam Traffic yingxaki enkulu kwisixeko, nzima yayo kakhulu ngenxa yokufuna indawo yokupaka, ngoko "ukuxinana" liye laba asilogama inkoliso eqhelekileyo kwabo bantu abahlala esixekweni. Ngoko ke, kwesi sixeko, ukuba hoverboard sombane mabazenzele lula, ingakumbi ehlotyeni nasebusika, ...Funda ngaphezulu »